गोपनीयता नीति | ताजा समाचार भारत - एशियाई टाइम्स
एशियाई टाइम्समा, एशियाई-टाइम्स.com मा पहुँचयोग्य, हाम्रो मुख्य प्राथमिकताहरू मध्ये एक हाम्रो आगन्तुकहरूको गोपनीयता हो। यस गोपनीयता नीति कागजातमा प्रकारका जानकारीहरू हुन्छन् जुन एशियनटाइम्सद्वारा संकलित र रेकर्ड गरिएको हुन्छ र हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं।
यदि तपाइँसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू छन् वा हाम्रो गोपनीयता नीतिको बारेमा थप जानकारी चाहिन्छ भने, हामीलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्न संकोच नगर्नुहोस् [इमेल सुरक्षित]
एशियाई टाइम्सले लग फाइलहरू प्रयोग गर्ने मानक प्रक्रिया अनुसरण गर्दछ। यी फाईलहरू वेबसाइट भ्रमण गर्दा आगंतुकहरू लग गर्नुहोस्। सबै होस्टिंग कम्पनीहरूले यो गर्छन् र होस्टिंग सेवाहरूको विश्लेषकको एक अंश। लग फाइलहरूले स collected्कलन गरेको जानकारीमा इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगानाहरू, ब्राउजर प्रकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी), मिति र समय टिकट, सन्दर्भ / बाहिरिने पृष्ठहरू, र संभवतः क्लिकको संख्या समावेश गर्दछ। यी कुनै पनि जानकारीसँग लिंक गरिएको छैन जुन व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य छ। जानकारीको उद्देश्य ट्रेंडहरूको विश्लेषण, साइट प्रशासन, वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूको आन्दोलन ट्र्याक गर्न, र डेमोग्राफिक जानकारी स gathering्कलन गर्नु हो।
कुकिज र वेब बीकनहरू
कुनै अन्य वेबसाइट जस्तै, एशियाई टाइम्सले 'कुकीज' प्रयोग गर्दछ। यी कुकिजहरू आगंतुकको प्राथमिकताहरू, र वेबसाइटमा पृष्ठहरू जुन आगन्तुकले पहुँच गरेको वा भ्रमण गरेको भण्डार गर्दछ। जानकारी प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिन्छ आगन्तुकहरूको ब्राउजर प्रकार र / वा अन्य जानकारीमा आधारित वेब पेज सामग्री अनुकूलित गरेर।
डबलक्लिक डार्ट कूकी
गुगल हाम्रो साइट मा एक तेस्रो पार्टी विक्रेता हो। यसले कुकीहरू पनि प्रयोग गर्दछ, डार्ट कुकिजको रूपमा चिनिएका, हाम्रो साइट आगन्तुकहरूलाई उनीहरूको www.AsianTimes.com र इन्टरनेटमा अन्य साइटहरूमा भ्रमणको आधारमा विज्ञापनहरू प्रदान गर्न। जहाँसम्म, आगन्तुकहरू तलको यूआरएलमा गुगल विज्ञापन र सामग्री नेटवर्क गोपनीयता नीति भ्रमण गरेर डार्ट कुकिजको प्रयोग अस्वीकार गर्न सक्दछन् - https://policies.google.com/technologies/ads.
हाम्रो साइटमा केही विज्ञापनदाताहरूले कुकीहरू र वेब बीकनहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। हाम्रो विज्ञापन साझेदार तल सूचीबद्ध छन्। हाम्रो प्रत्येक विज्ञापन साझेदारको आफ्नो डेटा गोपनीयता नीतिहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको आफ्नै गोपनीयता नीति छ। सजिलो पहुँचको लागि, हामीले तिनीहरूको गोपनीयता नीतिहरू तल हाइपरलिked्क गर्‍यौं।
तपाईले यो सूचीलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ एशियनटाइम्सका प्रत्येक विज्ञापन साझेदारहरूको लागि गोपनीयता नीति।
तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भरहरू वा विज्ञापन नेटवर्कहरूले टेक्नोलोजीहरू जस्तै कुकीहरू, जाभास्क्रिप्ट, वा वेब बीकनहरू प्रयोग गर्दछ जुन उनीहरूको सम्बन्धित विज्ञापनहरूमा प्रयोग गरिन्छ र लि Asian्क जुन एशियनटाइम्समा देखा पर्दछ, जुन प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा सिधा पठाइन्छ। यो स्वचालित रूपमा तपाइँको IP ठेगाना प्राप्त गर्दछ जब यो हुन्छ। यी टेक्नोलोजीहरू उनीहरूको विज्ञापन अभियानको प्रभावकारिता नाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र / वा विज्ञापन सामग्री निजीकृत गर्न जुन तपाईले भ्रमण गर्नुभएको वेबसाइटहरूमा अवलोकन गर्नुहुन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि एशियाईटाइम्ससँग यी कुकीजमा पहुँच वा नियन्त्रण छैन जुन तेस्रो-पार्टी विज्ञापनदाताहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
एशियाई टाइम्सको गोपनीयता नीति अन्य विज्ञापनदाता वा वेबसाइटहरूमा लागू हुँदैन। यसैले, हामी तपाईंलाई अधिक विस्तृत जानकारीको लागि यी तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भरहरूको सम्बन्धित गोपनीयता नीतिहरू परामर्श गर्न सल्लाह दिइरहेका छौं। यसले उनीहरूका अभ्यासहरू र केही विकल्पहरूको अप्ट-आउट कसरी गर्ने बारे निर्देशनहरू समावेश गर्न सक्दछ। तपाइँ यहाँ गोपनीयता नीतिहरु र तिनीहरुको लिंकहरु को एक पूर्ण सूची पाउन सक्नुहुन्छ: गोपनीयता नीति लिंक।
तपाइँले तपाइँको व्यक्तिगत ब्राउजर विकल्पहरू मार्फत कुकीहरू असक्षम गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। विशिष्ट वेब ब्राउजरहरूको साथ कुकी व्यवस्थापनको बारे थप विस्तृत जानकारी जान्न, यो ब्राउजरहरूको सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। कुकीहरू के हुन्?
हाम्रो प्राथमिकताको अर्को भाग इन्टरनेट प्रयोग गर्दा बच्चाहरूको लागि सुरक्षा थप्दै छ। हामी आमाबाबु र अभिभावकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, मा भाग लिन र / वा निगरानी गर्न र तिनीहरूको अनलाइन गतिविधिको मार्गदर्शन गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं।
एशियाईटाइम्सले जानाजानी १ 13 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुबाट कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी स collect्कलन गर्दैन। यदि तपाइँ तपाइँको बच्चाहरुले हाम्रो वेबसाइटमा यस प्रकारको जानकारी उपलब्ध गराउनु भएको सोच्नुहुन्छ भने हामी तपाइँलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न प्रोत्साहन गर्छौं र हामी तुरुन्तै हटाउन हाम्रो सक्दो प्रयास गर्नेछौं। हाम्रो रेकर्डबाट त्यस्तो जानकारी।
यो गोपनीयता नीति हाम्रो अनलाइन गतिविधिहरूमा मात्र लागू हुन्छ र एशियनटाइम्समा उनीहरूले साझेदारी गरेको र / वा संकलन गर्ने जानकारीको सम्बन्धमा हाम्रो वेबसाइटमा आगन्तुकहरूको लागि मान्य छ। यो नीति अफलाइन वा यस वेबसाइट बाहेक अरू च्यानल मार्फत संकलन गरिएको कुनै पनि जानकारीमा लागू हुँदैन।
मनोरञ्जन9 महिना पहिले
लुसी लिउले अनुपम खेर निर्देशित गरे।
व्यापार9 महिना पहिले
इन्दौरका युवा इन्स्टाग्राम प्रभावकर्ता - तुषार सिलावत